Maqaallada ku saabsan Venezuela
Ma shaqo ka raadineysaa Venezuela? Eeg sida loo helo Hal
November 21, 2020 Maitri Jha shaqo, Venezuela
Ma shaqo ka raadineysaa Venezuela? Mise dhowaan ayaa loo guuray Venezuela? Waan kaa caawin karnaa helitaanka. Waddanku wuxuu caan ku yahay warshadaha batroolka. Sidoo kale, waxay ka mid tahay 17ka wadan ee ugu badan ee megadgadheer adduunka oo dhan. Sida, waxaa
Venezuelans? Hubi Sida Loo Dalbado Ilaalin Magangalyo
April 22, 2020 Demi qaxootiga, Venezuela
Sida laga soo xigtay hay'adda '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' loo sii gudbiyey oo la soo saaray. Waxay sidaas samaynayaan sababtoo ah kororka rabshadaha, amni-darrada iyo hanjabaadaha. Sidoo kale, waxaa soo food-saaray cunno yari, daawo iyo adeegyo muhiim ah. Laga soo bilaabo warbixinnada loo qoro 'EveRC'
Hel macluumaad ku saabsan Venezuela Visa!
April 22, 2020 Karuna Chandna Venezuela, fiisada
Venezuela waxay ku taal xeebta waqooyiga Koonfurta Ameerika. Iyada oo ay ku nool yihiin qiyaastii 3.7 crores, Waxay caan ku tahay saliidda, dumarka quruxda badan, Xiddigaha Xiddigaha, iyo ciyaartoyda baseball. Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Venezuela. Fasax, cilmi baaris, kulan ganacsi, iyo
February 4, 2020 Maitri Jha waxbarasho, Venezuela
Qorshaynta inaad wax ku barato Venezuela waxay fiirinayaan toddobada jaamacadood ee ugu sareeya Venezuela. Jaamacadaha ugu sareeya Venezuela Sida laga soo xigtay topuniversities.com, waxaa jira sagaal jaamacadood oo ku yaal Venezuela kuwaas oo ku dhex jira Darajada Jaamacadda (2018) ee Jaamacadda QS Latin America
Liiska cosbitaalada Venezuela
February 2, 2020 Maitri Jha caafimaadka, Venezuela
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Venezuela waxaa si guud loogu qaybiyaa laba qaybood oo ah qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Liiska isbitaalka ee ku yaal meesha iyo lambarka taleefanka ayaa lagu bixiyay maqaalkan. Isbitaalka Jaamacadda - Isbitaalka Maracaibo Luis Razetti - Barinas
Liiska bangiyada Venezuela
February 1, 2020 Maitri Jha lacag, Venezuela
Nidaamka maaliyadeed ee ballaaran ee Venezuela wuxuu muujiyay koror degdeg ah. Taasi waxay ahayd intii u dhaxeysay 1950-meeyadii illaa 1980-meeyadii. Waxay astaan ​​u ahayd jiritaanka xirfad-xirfadeed ee hay’adaheeda. Sannadkii 1989, waaxda adeegyada maaliyadeed waxay ka koobnayd 41 bangiyo ganacsi. 23 hay'adaha maalgelinta ee dawladda,
February 1, 2020 Maitri Jha safarka, Venezuela
Qiimaha nolosha waa arrin aad u muhiim ah haddii aan ka hadalno Venezuela sida xaqiiqda ah, way ka jaban tahay qiimaha nolosha ee Mareykanka laakiin wali, sida laga soo xigtay numbeo qiimaha nolosha ee Venezuela waa 11.58% ka badan
Nidaamka gaadiidka Venezuela
February 1, 2020 Maitri Jha soo qaado, Venezuela
Kama heli doontid wax tareen ah Venezuela laakiin haa waxaa jira basas badan si aad si fudud ugu safri karto dalka gudahiisa basas, gawaarida, iyo tagaasida. Aad ayey muhiim u tahay inaad si joogto ah u qaadatid kaarkaaga aqoonsiga, sida
January 30, 2020 Demi wax in la sameeyo, Venezuela
Wax walba kuma kaxaysan karno meel cusub inkasta oo aan dooneyno inaan qaadno taasna waxay aad muhiim u tahay inaan aqoon u yeelano suuqyada ku dhow ama ku yaal waddankaas / magaaladaas gaarka ah. Tan dhexdeeda
Venezuela meelaha quruxda badan waa inaad booqataa
January 25, 2020 Karuna Chandna wax in la sameeyo, Venezuela
Venezuela waa waddan leh dhaqan kala jaad ah xeebta Waqooyiga ee Koonfurta Ameerika. Waa waddan leh muuqaal aad u qurux badan, laga soo bilaabo xeebaha ilaa buuraha dushooda. Fiiri liiska meelaha ugu fiican ee Venezuela